အားလပ်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအချိန်ဖြုန်းကြမလဲ?
9 Oct 2018 . 5:10 PM
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်းပျော်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး ကိုယ်စီအလုပ်တွေနဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီး အချိန်ပေးဖို့က ပိုပြီးခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို အောက်တိုဘာလလိုမျိုး သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ပိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ပေးလို့ရလာပါပြီ။
အဲ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတူရှိနေတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုမျိုး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းကြမလဲ? အခုဒီ Article လေးမှာ ပျော်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေကို ရရှိအောင် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မယ့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကို ပြောပြမယ်ဆိုရင် လိုက်လုပ်ကြည့်ကြမလား?
(၁) ပျော်စရာဓါတ်ပုံ Challenge တွေလုပ်ကြမယ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာက အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းဓါတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရူခင်းပုံတွေ၊ Portrait ပုံတွေရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးတော့ ဘယ်သူကပိုကောင်းတဲ့ပုံရိုက်နိုင်သလဲဆိုတာကို ပြိုင်ကြည့်ကြည့်ပါ။
သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မှာစုပြီး အိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ညလုံးပေါက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာက ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ဖန်တီးတာကလည်း ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြုန်းနည်းတစ်ခုပါ။ TV Channel တွေက တစ်ညလုံးလာနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေဝယ်ထားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဇတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆို ပျော်စရာကောင်းမှာအသေအချာပါပဲ။
(၃) အပြင်မှာ အချိန်ုဖြုန်းမယ်
သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေရာထဲမှာ ချိန်းတာထက် အပြင်ကိုလျှောက်သွားတာကလည်း တကယ်ကို မတူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်ကို ခံစားနိုင်စေမှာပါ။ Shopping Center တွေ၊ ပန်းခြံတွေနဲ့ တခြားအနားယူလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကို လျှောက်သွားပြီး အမှတ်တရာဓါတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရမှာပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ Samsung ကအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Galaxy J6+ ရဲ့ Dual Camera မှာပါဝင်လာတဲ့ Live Focus လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဆိုရင် ကိုယ့်တစ်သက်တာအမှတ်တရဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။
(၄) Dinner Party တွေ အတူပြုလုပ်ကြမယ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်မှာ ညစာစားတာထက် အိမ်မှာ Dinner Party လုပ်တာကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ အပြင်မှာစားတာထက် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟင်းချက်စားကြတာကလည်း တကယ်ကို ပျော်စရာပါ။
(၅) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမယ်
အခုလိုမျိုး ဖုန်းတွေကိုယ်စီရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြည့်တာပါ။ လုပ်ရမှာက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ ရိုက်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ညွန်းတွေ၊ ဇာတ်ကွက်တွေကို အတူစဉ်းစားပြီးတော့ အဲ့အတိုင်းရိုက်ရုံပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လိုမျိုး ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရိုက်ပြီးတော့ ဖုန်းပေါ်မှာပဲ အလွယ်တကူ Edit လုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖန်တီးကြည့်တာကလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါ။
အခုလို လူတိုင်းစမတ်ဖုန်းတွေအသုံးပြုလာတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေဂိမ်းအတူဆော့ဖို့အတွက် Console ဂိမ်းစက်တွေရှိစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Multi-player ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ BombSquad ၊ Words with Friends ၊ Chess ၊ Glow Hockey ၊ Heads Up နဲ့ Mobile Legends လိုမျိုး ဂိမ်းတွေကို စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ အတူဆော့လို့ရနေပါပြီ။
အခုလိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက် စမတ်ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ Samsung ကနေ အသစ်ထုတ်ထားတဲ့ Galaxy J6+ ဖုန်းက ငွေကျပ် ၃ သိန်းဝန်းကျင်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတွေပါဝင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီ Samsung Galaxy J6+ ဖုန်းမှာဆိုရင် Dual Camera စနစ် ၊ 6″ Infinity Display နဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ Side Fingerprint Scanner ပါဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု Galaxy J6+ စမတ်ဖုန်းကို လှပတဲ့ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်နဲ့ အနီရောင် စသဖြင့် ၃ ရောင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ကနေ စတင်ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးတယျဆိုတာ အမွဲတမျးပြျောစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုး ကိုယျစီအလုပျတှနေဲ့ နရေ့ကျတိုငျးကို ကြျောဖွတျနရေတဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှပွေီ့း အခြိနျပေးဖို့က ပိုပွီးခကျခဲလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုလို အောကျတိုဘာလလိုမြိုး သီတငျးကြှတျအားလပျရကျတှရှေိနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ပိုပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အခြိနျပေးလို့ရလာပါပွီ။
အဲ့တော့ သူငယျခငျြးတှအေတူရှိနတေဲ့နရောမှာ ဘယျလိုမြိုး ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ အခြိနျဖွုနျးကွမလဲ? အခုဒီ Article လေးမှာ ပြျောစရာအခိုကျအတနျ့လေးတှကေို ရရှိအောငျ ကိုယျတိုငျဖနျတီးနိုငျမယျ့အလှယျကူဆုံးနညျးလမျးတှကေို ပွောပွမယျဆိုရငျ လိုကျလုပျကွညျ့ကွမလား?
(၁) ပြျောစရာဓါတျပုံ Challenge တှလေုပျကွမယျ
သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ကိုယျ့ဖုနျးကငျမရာနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျတာက အမွဲတမျးပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့အခငျြးခငျြးဓါတျပုံရိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ ရူခငျးပုံတှေ၊ Portrait ပုံတှရေိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျယှဉျပွိုငျပွီးတော့ ဘယျသူကပိုကောငျးတဲ့ပုံရိုကျနိုငျသလဲဆိုတာကို ပွိုငျကွညျ့ကွညျ့ပါ။
သူငယျခငျြးတှေ အိမျမှာစုပွီး အိပျဖွဈတယျဆိုရငျ ညလုံးပေါကျရုပျရှငျကွညျ့တာက ပြျောစရာကောငျးတဲ့အခိုကျအတနျ့တှကေို ဖနျတီးတာကလညျး ကောငျးတဲ့အခြိနျဖွုနျးနညျးတဈခုပါ။ TV Channel တှကေ တဈညလုံးလာနတေဲ့ ရုပျရှငျတှကေိုကွညျ့တာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့ ရုပျရှငျကားတှဝေယျထားပွီးပဲဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ ဇတျလမျးတှဲတှကေို ကွညျ့တာပဲဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူဆို ပြျောစရာကောငျးမှာအသအေခြာပါပဲ။
(၃) အပွငျမှာ အခြိနျုဖွုနျးမယျ
သူငယျခငျြးတှေ တှတေဲ့အခြိနျမှာ တဈနရောထဲမှာ ခြိနျးတာထကျ အပွငျကိုလြှောကျသှားတာကလညျး တကယျကို မတူထူးခွားတဲ့အတှအေ့ကွုံအသဈကို ခံစားနိုငျစမှောပါ။ Shopping Center တှေ၊ ပနျးခွံတှနေဲ့ တခွားအနားယူလို့ကောငျးတဲ့နရောတှကေို လြှောကျသှားပွီး အမှတျတရာဓါတျပုံတှရေိုကျထားတာကလညျး တျောတျောလေးကို ကောငျးတဲ့အတှအေ့ကွုံတဈခုရမှာပါ။ မကွာသေးခငျကမှ Samsung ကအသဈထှကျရှိလာတဲ့ Galaxy J6+ ရဲ့ Dual Camera မှာပါဝငျလာတဲ့ Live Focus လုပျဆောငျခကျြနဲ့ဆိုရငျ ကိုယျ့တဈသကျတာအမှတျတရဖွဈစမေယျ့ ဓာတျပုံလေးတှကေို ရိုကျကူးသိမျးဆညျးထားနိုငျမှာပါ။
(၄) Dinner Party တှေ အတူပွုလုပျကွမယျ
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျမှာ ညစာစားတာထကျ အိမျမှာ Dinner Party လုပျတာကလညျး တျောတျောလေးကို ကောငျးတဲ့အမှတျတရတှကေို ဖနျတီးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတဈခုပါ။ အပွငျမှာစားတာထကျ သူငယျခငျြးတှစေုပွီးတော့ ပြျောပြျောပါးပါး ဟငျးခကျြစားကွတာကလညျး တကယျကို ပြျောစရာပါ။
(၅) သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ရုပျရှငျဖနျတီးမယျ
အခုလိုမြိုး ဖုနျးတှကေိုယျစီရှိနတေဲ့အခြိနျမှာ ပွုလုပျသငျ့တဲ့နောကျထပျအရာတဈခုက ရုပျရှငျရိုကျကွညျ့တာပါ။ လုပျရမှာက သူငယျခငျြးတှစေုပွီးတော့ ရိုကျခငျြတဲ့ ရုပျရှငျအတှကျ ဇာတျညှနျးတှေ၊ ဇာတျကှကျတှကေို အတူစဉျးစားပွီးတော့ အဲ့အတိုငျးရိုကျရုံပါပဲ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ရုပျရှငျလိုမြိုး ကိုယျတိုငျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရိုကျပွီးတော့ ဖုနျးပျေါမှာပဲ အလှယျတကူ Edit လုပျပွီး ရုပျရှငျတဈခုဖနျတီးကွညျ့တာကလညျး ပြျောစရာတဈခုပါ။
အခုလို လူတိုငျးစမတျဖုနျးတှအေသုံးပွုလာတဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးတှဂေိမျးအတူဆော့ဖို့အတှကျ Console ဂိမျးစကျတှရှေိစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အခုနောကျပိုငျးမှာ Multi-player ဂိမျးတှဖွေဈတဲ့ BombSquad ၊ Words with Friends ၊ Chess ၊ Glow Hockey ၊ Heads Up နဲ့ Mobile Legends လိုမြိုး ဂိမျးတှကေို စမတျဖုနျးတဈလုံးပျေါမှာ အတူဆော့လို့ရနပေါပွီ။
အခုလိုမြိုး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူအခြိနျဖွုနျးဖို့အတှကျ စမတျဖုနျးကောငျးကောငျးတဈလုံးလညျးလိုအပျမှာဖွဈပွီးတော့ ဒီနရောမှာ Samsung ကနေ အသဈထုတျထားတဲ့ Galaxy J6+ ဖုနျးက ငှကေပျြ ၃ သိနျးဝနျးကငျြမှာ လုပျဆောငျခကျြကောငျးတှပေါဝငျတဲ့စမတျဖုနျးတဈခုလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
ဒီ Samsung Galaxy J6+ ဖုနျးမှာဆိုရငျ Dual Camera စနဈ ၊ 6″ Infinity Display နဲ့ ဒီဇိုငျးအသဈဖွဈတဲ့ Side Fingerprint Scanner ပါဝငျမှာလညျးဖွဈပါတယျ။ အခု Galaxy J6+ စမတျဖုနျးကို လှပတဲ့ အနကျရောငျ၊ မီးခိုးရောငျနဲ့ အနီရောငျ စသဖွငျ့ ၃ ရောငျရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပွီးတော့ လာမယျ့အောကျတိုဘာလ ၁၂ ရကျကနေ စတငျပွီး ဝယျယူရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။